Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Beled Xaawo ee ciidamada DF iyo Jubaland | Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Beled Xaawo ee ciidamada DF iyo Jubaland
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Beled Xaawo ee ciidamada DF iyo Jubaland
Beled Xaawo (Caasimada Online) – Dhiilo colaadeed ayaa waxaa weli laga soo sheegaya inay ka taagan tahay Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, xilli kastana ay dhici karto inuu dagaal ku dhex maro dhinacyada isu haya.
Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wada gudaha iyo duleedka ee Degmada Beled Xaawo.
Ciidamada Dowladda ayaa fariisimo hor leh ka samaystay gudaha Degmada Beled Xaawo, wixii ka dambeeyay gacan ka hadalkii dhex maray iyaga iyo Ciidamada Jubbaland, maalintii shalay.
Cabdisalaan Maxamed Salaad oo ka mid ah dadka reer Beled Xaawo ayaa sheegay inay marxalad feejignaan ah ku jiraan Ciidamada Dowladda, halka Ciidamada Jubbaland ay iyaguna dhaqdhaqaaq ka samaynayan bannaanada hore ee Degmada Beled Xaawo.
Cabdisalaan Maxamed oo la hadlay Caasimada Online ayaa sidoo kale sheegay inay saaka xiran yihiin inta badan goobihii ganacsiga ee Degmada Beled Xaawo, dadka deegaankana ay isaga barakacayaan guryahooda.